Korintofo II 5 NA-TWI - Yenim sɛ, sɛ yewu na yegyaw saa - Bible Gateway
Korintofo II 4Korintofo II 6
Korintofo II 5 Nkwa Asem (NA-TWI)
5 Yenim sɛ, sɛ yewu na yegyaw saa nipadua yi a, yebenya honhom foforo a Onyankopɔn ankasa ayɛ a ɛnyɛ nipadua na ɛbɛyɛ yɛn ankasa de daa wɔ soro hɔ. 2 Mprempren, yesi apini pɛ sɛ wɔde soro atenae foforo no kata yɛn ho, 3 efisɛ, sɛ wɔde kata yɛn ho a, wɔrenhu yɛn nipadua nka ho. 4 Na sɛ yɛwɔ saa honam yi mu a, yesi apini na adesoa bi da yɛn so; ɛnyɛ sɛ yɛmpɛ sɛ yegyaw nipadua no na mmom yɛpɛ sɛ wɔde soro atenae foforo no kata yɛn ho sɛnea ɛbɛyɛ a nkwa bɛmene nea ewu no. 5 Onyankopɔn na wasiesie yɛn ama saa nsakrae yi na ɔde ne Honhom no maa yɛn sɛ nea ɔwɔ ma yɛn no nyinaa akyigyina.